လေလှိုင်းက ငါ့ကို ဖြတ်ပိုင်း ပြန်ပို့တယ်
နေသာထိုင်သာ ရှိပါရဲ့လား ဖာစီယာ။
အစိုးမရတဲ့ သဲမုန်တိုင်း ရှိမယ်
သဲကန္တာရကို အိမ်လုပ်နေသူတွေ ရှိမယ်
အခု အဲဒီ “ဘေဒိုအင်း”တွေရဲ့ အသွေးအသားတွေဟာ
သဲမုန်တိုင်းကြားမှာ ပန်းတစ်ပွင့်အဖြစ် မွေးဖွားခဲ့ပေါ့
ကောင်းကင် အဇဋာဟာ ပြာလဲ့နေခဲ့လိမ့်
လူ့လောက ၀င်ခါစ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ငိုသံလောက်
ဘုရားသခင်ရဲ့ အနူးညံ့ဆုံး ကောင်းခြီးပေးသံ
လောကမှာ အလေးလံဆုံး မေတ္တာတရား
ဒါပေမဲ့တွေ သိပ်များတဲ့ ကမ္ဘာမှာ
မင်းကို မွေးဖွားခြင်း မဟုတ်ခဲ့တာ သေချာတယ်
ကမ္ဘာဟာ ပွင့်လန်းပြီး ဆုတ်ယုတ်
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြေးလွှားဆော့ကစားလို့ ကောင်းနေတုန်း
ထိတွေ့သမျှ စုပ်ယူလို့ ကောင်းတုန်း
ကျောင်းကားဆီ ပြေးလွှားနေတဲ့ ခြေထောက်တွေက
အပူအပင်မဲ့ ပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်တွေ
ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလှခြယ်ဖို့ ခဲတံချွန်နေချိန်
ရွှေအဆင်းနဲ့ အိပ်မက်မှာ ကိုယ်ထင်ပြလိမ့်။
မင်းကမ္ဘာက အနားတွေ ဖွာထွက်နေ
လူမမြင်ကွယ်ရာမှာ တတိတိ ပိုးကျနေ
မခြောက်တဲ့ အဲဒီကမ္ဘာလေးဟာ နံစော်လို့
ခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်ဘုတ်သိုက်နဲ့ မင်းအဖေ သတ္တိခဲက
ကြွက်သားတွေ သန်မာပေမဲ့ အဝေးမှုန်သူ
သူ့ကိုယ်ပေါ်က အမွှေးအမျှင်တွေ ရှည်လျားသလောက်
သူ့အတွေ့အခေါ်က စပါးလုံးတစ်ထောက်လောက် မနက်သူ
မင်းရဲ့ ရယ်မောသံကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့သူ
မင်း မျက်လုံးတွေရဲ့ အရောင်ကို
အဲဒီလူတစ်ယောက် မင်းအဖေ ဖြစ်ခဲ့တာ
အခန်းထဲမှာ မြွေတစ်ကောင်က ခွေလို့
အနားကို ဖြည်းဖြည်း တိုးစမ်းပါ
နားကို အံကြိတ်ရင်း ကြိုးစား ပိတ်လိုက်ပါ
မွှေးပွ ၀က်ဝံရုပ်ကလေး ရှိရမယ့်အချိန်
တစ်ရေးနိုးချိန် သူမ စမ်းမိတာက
ဈေးခေါ်လို့ကောင်းတဲ့ အရောင်းသွက် ပစ္စည်း
မင်းဟာ အကောင်းဆုံးနဲ့ တစ်ခုတည်းသော ထုတ်ကုန်
အခန်းမီးကို ဘယ်လို ပိတ်ခဲ့သလဲ။
မင်းဟာ ဘယ်အရာကို ဆွဲယူ ဆုပ်ကိုင်ခဲ့သလဲ
လွင့်လာတဲ့ လေလှိုင်းဟာ အညိုအမည်းစွဲလို့
ငါတို့ဟာ အပြိုပြိုအလဲလဲနဲ့ ကွဲပြဲလို့။
တစ်ယောက်နာရင် တစ်ယောက် လျှာနဲ့ သပ်လို့
တစ်ယောက်ဆာရင် တစ်ယောက် ဖဲ့လို့
တစ်ယောက်လဲရင် တစ်ယောက် ထူရင်း
တစ်ယောက်လောင်ရင် တစ်ယောက် ငြှိမ်းရင်း
ဆင်းရဲတွင်းကို လုံးလုံး ပုံချလိုက်မယ်။
အဲဒီတောင်ကြောဟာ မတ်စောက်တဲ့ တောင်ကြော
ငါတို့ဟာ လုံးလုံး ပုံချလိုက်ကြမယ်။
ငါတို့ဟာ သိပ်တိုးတက် ယဉ်ကျေး
ငါတို့ဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိ အောင်မြင်
ငါတို့ဟာ ထားစရာမရှိအောင် ကြွယ်ဝချမ်းသာ
ငါတို့ဟာ ဒီလိုနဲ့ မင်းကို ထားစရာ ရှာမရ ဖြစ်ခဲ့ပေါ့။
ပြီးမြောက်အောင် ဆေးရောင်ခြယ်ခွင့် မရှိတဲ့ ကမ္ဘာ
ဘယ်ကိုမှ မကြည့်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ
ငါတို့ မင်းကို အခု အလံစိုက်မယ်
မင်းဟာ လူသားအဖြစ် အပြစ်ရှိလို့
နောက်တစ်ခါ ဒီကမ္ဘာကို မလာနဲ့
[ဖာစီယာ - အသက် ၁၁ နှစ်သမီးအရွယ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ၏ ရောင်းစားမှုဖြင့် မိမိထက် အသက် ၂၄ နှစ်ကြီးသူနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ရပြီး အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင် မီးဖွားရင်း သွေးလွန်သေဆုံးခဲ့ရသည့် ယီမင်နိုင်ငံသူ။]
[ဒီ ဖာစီယာ ကဗျာက ဒီနှစ် ထန်းရိပ်ညိုကဗျာဆု ရပါတယ်။ ပိတောက်ပွင့်သစ် (ဂျာနယ်ကျော်မမလေး)မှာ ပါခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာအကျဉ်းကိုလည်း ထပ်တင်ပေးပါမယ်။]
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ အရ အဲဒီ ကဗျာဆရာဟာ အာရုံကြောရောဂါနဲ့ အိပ်ရာပေါ်မှာပဲ နေနေရာတာ ဆယ်စုချီပြီး ရှိနေခဲ့တာတဲ့
Posted by mgphonemyint at 10:50 PM No comments:
ကျွန်တော် မရောက်ဖူးတဲ့ လမ်းတစ်ကာလည်းမရှိ
ကျွန်တော့ကို မဟောင်ဘူးတဲ့ ခွေးလည်း တစ်ကောင်မှမရှိ
ဘဝမှာ အမှတ်ရစရာ အကောင်းဆုံးဆိုတာကတော့
တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့ ကျွန်တော့ မျက်လုံးဟာ
ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမယ့်သူကို အဝေးကပင် ရှာဖွေနိုင်တာ
လမ်းဘေးက ဆေးလိပ်တိုကိုလည်း ပုံဖမ်းယူနိုင်သေးသပ
ဓါတ်စက်သီချင်းသံ ကြားခဲ့ရင် တစ်နေရာရာ
သူတို့ မောင်းထုတ်တဲ့အခါ ပြောရမယ့်စကား
သူတောင်းစားတို့ ရှိအပ်သော ဂုဏ်အင်္ဂါ
ယင်တဝဲဝဲ အနာတွေလည်း ကျွန်တော့မှာ ပြည့်စုံစွာ
အမျိုးပေါင်း ၄၀ ကျော် ရွတ်ဆိုပြနိုင်သေးသပ
ချဉ်သိုးသိုး ထမင်းမျိုးကိုလည်း နယ်ဖတ်ကာ
ကျွန်တော့ အစာအိမ်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား
လိုအပ်ရင် အခွံရော စားသုံးနိုင်တာ
အရသာ ဆိုတာ လျှာပေါ်မှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ
ကမ္ဘာမြေက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှန်သမျှ
ဆင်းရဲ မွဲတေမှုတွေနဲ့ ရိုးအီနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကမ္ဘာ
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကရုဏာဒြပ်တွေ ရှင်သန်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်ရာ
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ ဟမ်ဘာဂါတစ်ဖဲ့ စားသေက်ခဲ့ဖူး
ဖူးဆန်းတဲ့ ဟောဒီ ကမ္ဘာမြေ
တစ်ခါတစ်ရံ ကံကြမ္မာက မျက်စပစ်ပြတတ်ပေ
ပေးကမ်းစာ တွေ စားသောက်နေရဦးမှာ မုချ
ကျွန်တော် ၁၅ နှစ်သားမှာ
ကြမ်းပိုး ၁၆ ကောင်နဲ့ လွယ်အိတ်တစ်လုံးမျှ
ဒါပေမဲ့ကွာ . . .
လူတစ်ယောက် သူဝမ်းနည်းကြေကွဲတဲ့အခါ မျက်နှာအပ်ပြီး ငိုချလိုက်ဖို့
သချို င်္င်းမြေမှာ ကျီးတွေ တအားအား ပြိုသွား
ခုတော့ ဒါဟာ အိပ်မက်တစ်ခုပမာ မှုန်ဝါး
ပေါင်မုန့်မီးကင် ၊ ကြက်ဥဟတ်ဖရိုက် ၊ ဒိန်ခဲနဲ့ စည်သွပ်ဘူးတွေ ရှိရှာ
ကျွန်တော် နေ့စဉ်ရောက်ခဲ့ပေါ့ သူ့အလိုလို
အကိုကြီးတို့ အမကြီးတို့ ခင်ဗျား
ထမင်းကျန်ဟင်းကျန်း လေးများရှိရင် စွန့်ကြဲပါသနား ။
(ကဗျာရေးလို့ မကြီးပွားဘူးဆိုတဲ့ ချစ်ဇနီးသို့)
Posted by mgphonemyint at 2:30 PM 1 comment:
ခြေရင်းက တရုတ်အိမ်ကလည်း ညော်နံ့တွေလုပ်
ကလေးတွေကလည်း တဒုန်းဒုန်း တဒိုင်းဒိုင်းပြေး
ကျွန်တော်မှာ ကောင်းကောင်း မအိပ်ရ
အမေတို့ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကို ပြန်မလာတော့ဘူး။ ။
P.S ... စာပေစိစစ်ရေးမှ လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ...
ဒီကဗျာဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါ
ထိုကဲ့သို့ လေ့လာပြီးပါကလည်း တဆက်တည်း
ထိုကုလားအိမ်ရယ် တရုတ်အိမ်ရယ် အပေါ်ထပ်က ကလေးလေးတွေရယ်တို့ကို
တဆက်တည်း လိုအပ်သလို စစ်ဆေးအရေးယူပေးပါဦး
တကယ့်ကို မခံနိုင်တော့လို့ အိမ်ပြောင်းသွားရတာပါ...။
Posted by Moe Hlaing Nya at 2:47 AM 1 comment:
Flarf နှင့် Conceptual ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းရေး စီမံကိန်းအတွင်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းခွင်နှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပွင့်လန်းပေါ်ပေါက်လာမှုနှင့်အတူ
ကဗျာဆရာများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပေးများလိုအပ်လာကြောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အနုပညာဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ပြောကြားချက်အရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဗျာထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီတို့ကလည်း ပူးပေါင်းအကောင်အထည် ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။ ဆက်စပ်၍ ကဗျာလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းများနှင့်အတူ ကဗျာဓာတ်အားပေးစက်ရုံ နှင့် ကဗျာအလုပ်ရုံများလည်း တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Special Complexotic Poetry Zone တည်ထောင်လိုက်ရင် နိုင်ငံတကာက ကဗျာလုပ်ငန်းတွေရောက်လာမယ်။ လုပ်ငန်းတည်ထောင်ပြီးရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့အတူ နည်းပညာတွေလည်း ရောက်လာမယ်။ ကျွမ်းကျင်ကဗျာလုပ်သားတွေလည်း လိုအပ်လာမယ်။ ကျွမ်းကျင်အဆင့်ဖြစ်အောင် Training ပေးကြမယ်။ နောက်ဆုံး အထွေထွေလုပ်စားတွေအတွက်ပါ အလုပ်အကိုင်တွေ ရလာနိုင်တယ်။ ကြေညာစာတမ်းပါ ရည်မှန်းချက်၊ ယုံကြည်ချက်၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ သဘောထားဆိုင်ရာ ကတိက၀တ်များနှင့်အညီ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောအနုပညာအဖြစ် ထာဝစဉ်ရပ်တည်နိုင်ရေး၊ ကဗျာသူ/ကဗျာသားအားလုံး၏ ဘ၀လုံခြုံရေး၊ စားဝတ်နေရေးနှင့် အနုပညာလိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံရေး၊ ကဗျာအခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကဗျာစီကျင့်စဉ်ပါ အခွင့်အရေးများ ရရှိခံစားနိုင်ရေးတို့အတွက် ဥပဒေဖြင့် အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဟောင်းတွေကိုပဲ လှည့်သုံးနေရင်တော့ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ တံခါးဖွင့်အနုပညာမူဝါဒနဲ့ ကဗျာဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်မှာ အရမ်းပြတ်ကျန်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်နေမယ်။ ပြောရရင်ခေတ်ဟောင်းကဗျာဗေဒက အံမ၀င်တော့တဲ့အတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်တာတွေ လုပ်ရမယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်စနစ်ရဲ့ အခြေအနေ အရှိန်အဟုန်နဲ့အညီ နိုင်ငံတကာသို့ ဆက်သွယ်ပျံသန်းနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများလည်း များလာပြီဖြစ်သည်။ သူတို့ကဗျာဗေဒက ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ ကဗျာဗေဒထက်ကို မြင့်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဦးတည်းက ချည်းလုပ်လို့မရပါဘူး။ အချင်းချင်း enforcement အပိုင်းမှာ အားနည်းနေတာကြောင့် ဖြစ်မယ်။ ဣနြေ္ဒရရ၊ သိက္ခာရှိရှိ၊ ကဗျာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကဗျာဗေဒက အားကိုးလောက်တဲ့ကဗျာဗေဒဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ခပ်ပြင်းပြင်း လေးကိုင်ထားတာ၊ ထိလိုက်လျှင် တုံးကနဲပဲ။ ကျွန်တော့ ဟာတွေကတော့ လန်းတယ်၊ အရှင်းပဲ။ ဒီကဗျာပစ္စည်းတွေက ဓာတုဓာတ်ကြွင်းတွေ၊ ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးချက်တွေ သတ်မှတ်ထားသင့်သလား။ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ဈေးကွက်မျိုးတွေကို ကဗျာပစ္စည်း တင်ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး sensitive ဖြစ်တယ်။ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိတယ်။
၂ဝ၁ဝ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ရက်
Posted by mgphonemyint at 10:10 PM No comments:
ဓာတ်ဘူးအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်သည်။ အပူငွေ့ဟာလှိုက်ခနဲတက်လာသည်။ အခါအားလျှော်စွာ သူမကိုသတိရမိသည်။ ရယ်သံများသည် ခလုတ်နှိပ်လိုက်သဖြင့် ထွက်လာရသကဲ့သို့ ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်နေသည်။ မေးခွန်းသည် ဖြေရှင်းချက် ကောင်းကောင်းကို ငတ်မွတ်နေခဲ့သည်။ ဝဲကျလာသောဆံနွယ်များကြားတွင် စံပယ်ပွင့်တို့ရှိမနေတော့ပါ။ သို့ရာတွင် ရနံ့ကတော့ ရမြဲတိုင်းရနေသည်။ ရင်ထဲမှအပူငွေ့သည် သူမကိုသတိရမိသည့်အခါ လှိုက်ခနဲတက်လာတတ်သည်။ နေမင်း၏ စူးရှသောအလင်းရောင်ကို မည်သည့်အရာကမျှ ကွယ်ကာမပေးနိုင်တော့ပါ။ ချုပ်တည်းနိုင်ခြင်းကင်းမဲ့စွာဖြင့် နာရီလက်တံတို့ရွေ့နေပေလိမ့်မည်။
သူမပျော်ရွှင်နေသည်လား။ မေးခွန်းဟာ လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲ ခါးပိုက်နှိုက်ခံလိုက်ရသည်။ ရယ်ရွှင်မြူးတူးသံတို့အား တပ်အပ်သေချာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကောင်းကင်၏အနားသတ်မျဉ်းအထိ ပျံသန်းသွားနိုင်သည့် ငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်ချင် ခဲ့သည်။ လောကကြီးစတင်ဖြစ်ထွန်းချိန်ကတည်းက တရားမျှတမှုသည်အလည်ရောက်မလာတော့ချေ။ စံပယ်ရုံလေးနေရာတွင် ပိန္နဲပင်တစ်ပင်ပြောင်းစိုက်လိုက်သည်။ ပိန္နဲသီးသည်စား၍ရကြောင်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စောဒက မတက်မိ၍ ပိန္နဲပင်အားနှုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပသို့ဆိုစေ ဓာတ်ဘူးအဖုံးကိုဖွင့်မိသည်နှင့် အပူငွေ့သည် လှိုက်ခနဲတက်လာပေလိမ့်ဦးမည်။
တစ်ခါတရံတွင် သိုသိပ်စွာဝှက်ထားသော ရုပ်ကလာပ်များသည် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် တည်ရှိနေတတ်သည်။ သူမကိုသတိစိတ်တို့ဖြစ်နေခဲ့သော်လည်း သူမသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုကား သဲသဲကွဲကွဲ မမှတ်မိတော့ပါ။ ဘုံဆိုင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးသည် လေဝင်လေထွက်မကောင်းသလို ငေးကြည့်ချင်စရာ ဆည်းဆာအလှလည်း မရှိခဲ့ပါ။ ယခုလိုနေရာမျိုးတွင် သူမနှင့် အတူမထိုင်ခဲ့ဖူးပါ။ ဘယ်နေရာတွင်မှ မထိုင်ဖူးခြင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုအချိန်ထိ စံပယ်တစ်ပွင့်တလေမျှ ကောက်ရခဲ့ဖူးခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုသည့် အမေးစကားကို မဖြေနိုင်ခဲ့သော်လည်း လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တော်လောက်ပါပြီ။ ရပ်တန့်ဖို့အတွက် လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ရှိပြီဟုထင်သည်။ မနက်ဖြန်မနက်နေထွက်မည်လား။ သေချာအောင် ဓာတ်ဘူးအဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရပါဦးမည်။ အကယ်၍ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သော လမင်းသာ ဓာတ်ဘူးအတွင်းရောက်ရှိနေခဲ့ပါလျှင် …
Posted by mgphonemyint at 4:21 PM No comments:
ကြွေသွားတယ် ကို စ ရတယ်၊၊ သိမှုမှာ ဆေးလိပ်ပြာ ၊ ကြယ်၊၊ ခဏ စဉ်းစား၊၊ ဟိုလူကြီး စာသားတစ်ခု ကို ထည့်ရေးရင် ကဗျာလန်းသွားမလား၊၊ ကြွေသွားတာ ကြာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မေ့မရနိုင်သေးတဲ့ ကဗျာလောကရဲ့ ဆေးလိပ်ပြာကြီး ဟိုလေ.. ဘယ်သူ?၊၊ တရားရေ! ဒီလူကြီးကို ထိခိုက်မိရင် အဆဲခံရမလား၊၊ အဆဲခံရတာ အဆန်းမှ မဟုတ်တာ၊၊ သီချင်းဖွင့်ထားရင်တောင် အဆဲခံနေရတဲ့ခေတ်ပဲ၊၊ ဟုတ်တာပေါ့၊၊ မိုးမွှန်အောင်ဆဲတာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်း ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေ ကမ္ဘာကျော်နေတဲ့ခေတ်ပဲ၊၊ ပျင်းလိုက်တာ အကြောင်းအရာလဲ မရှိဘူး၊၊ ဗိုက်ဆာသွားတယ်၊၊ စားစရာ ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံးပဲတွေ့၊၊ အာဟာရတော့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊၊ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ငတ်နေတဲ့သူတွေ အကြောင်း ရေးရင်ကောင်းမလား၊၊ ခဏစဉ်းစား၊၊ မရ၊၊ ဘယ်လိုမှ ကိုယ်ချင်းစာပေးလို့ မရ၊၊ ကိုယ်တိုင်ကလဲ အကြာကြီးမငတ်ဖူး၊၊ ကြည့်ကျက်ဖောပြီး ရေးလိက်ရင် ကောင်းမလား၊၊ စဉ်းစား၊၊ မရ၊၊ စိတ်မပါ၊၊ ကြွေသွားတယ် ပြန်ရောက်လာတယ်၊၊ ဘာလဲဟ!၊၊ သိမှုမှာ ကွက်ရှင်မက်ခ်၊၊ အချစ်ကဗျာရေးစေချင်တာလား၊၊ ဘယ့်နှယ့်၊၊ ခဏစဉ်းစား၊၊ သူမကို မြင်မြင်ချင်း ကြွေသွားတဲ့…၊၊ မကြိုက်၊၊ ပြန်စဉ်းစား၊၊ သူမရဲ့ ကြွေသွားတဲ့ မျက်တောင်မွှေး၊၊ ဟာ !!! (အသံရှည်ဆွဲ) ၊၊ အမွှေးတွေ၊၊ အမွှေးမဲည်းမဲည်းတွေ၊၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်၊၊ နေမြဲ ကြည့်ကြည့်နေတဲ့ ဂျပန်ရုပ်ရှင်တွေ၊၊ စေတန်လ်ကြီးနိမိတ်ပြတဲ့ ချိုင်းမဲမဲတွေ၊၊ ဖီးလ်ငုတ်သွားတယ်၊၊ ဒါတွေထည့်ရေးလိုက်ရင် အချစ်ကဗျာစစ်စစ်ရဲ့အဖွင့်ဖြစ်ပါ့မလား၊၊ ဇဝေဇဝါဖြစ်၊၊ စဉ်းစား ၊၊ ဒိုင်လျှိုလေး ရှော်လိုက်၊၊ အစကပြန်တွေး၊၊ အိပ်ချင်လာပြီ၊၊ ဆက်မရေးရင် နေမြဲ နဲ့ ရင်ခွင်ရှိန်းကဆဲမှာ၊၊ စဉ်းစားစမ်း၊၊ ငါကဗျာရေးတော့ကော ယနေ့ ကဗျာလောက က ဘာဖြစ်မှာမို့လဲ၊၊ မဟုတ်သေးပါဘူး၊၊ ကဗျာဘဘဆရာကြီးတွေ ပြောခဲ့ကြတာမှာ
ကဗျာဟာ ( ပကျိပကျိ ကျလွိကျလွိ )၊၊
ကဗျာကို ( ကွိကွိကွကွကွက်ကွက် )၊၊
ဟုတ်တယ်၊၊ ကဗျာကို စောင့်ရှောက်ရမယ်၊၊ သန့်ရှင်းမွန်မြတ်ကြည်လင်နေရမယ်ကဗျာဆိုတာ၊၊ ဗိုက်ဆာလာ ပြန်ပြီ၊၊ ကျစ်!၊၊ ထပ်ရှော်လိုက်တယ်၊၊ စားစရာမရှိငတ်ပြတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ကြားက ရေးခဲ့ကြတဲ့ကဗျာတွေရှိတယ်၊၊ ကဗျာရေးရမယ်၊၊ ကဗျာရေးရင်း ချမ်းသာလာရင် အိုင်ဖုန်း မကိုင်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်၊၊ အိုင်ဖုန်းကြော်ငြာတစ်ခုမှာ … ၊၊ ပြောရင်းစိတ်တိုလာတယ်၊၊ ဗိုက်ကအော်နေတဲ့ ဂွီဂွီဂွမ်ဂွမ်အသံကို မကြားချင်လို့ နားပိတ်ထားလိုက်တယ်၊၊ ကဗျာရေးလို့ ချမ်းသာလာရင် Mae ရဲ့ ရှိုးပွဲသွားကြည့်မယ်၊၊ အီမိုလို ဝတ်ပြီးဆင်ပြီး Paramore ပွဲလဲသွားမယ်၊၊ ခုန်ပေါက်မြူးကြွ၊၊ အာ! ငါဘာလို့ မြန်မာပြည်က ကဗျာစာအုပ်တွေ ဝယ်ဖတ်မယ်လို့ မတွေးရတာလဲ၊၊ ဟုတ်တယ်၊၊ ကဗျာရေးရမယ်၊၊ မနက်စောစော ပဲပလာတာ နှစ်ပွဲဆက်တိုက်စားပြီးရင် ကဗျာတွေကို ငါ ဆက် ရေး ရ. . . . မယ် ၊၊ ခေါ ခေါ ခေါ ခေါ ခေါ ခေါ ၊၊ Zzzz Zzzz Zzzzz Zzzzz zzzzZ zzzzZ၊၊
Posted by ဇာဇာ at 10:00 PM 1 comment:
အများစုသော ပါဝါရိန်းဂျားတွေ ဗိုလ်ထပ်ဆွဲတော့လည်း
နေ့စဉ်ဆဲနေကျအတိုင်း အိုကွယ် . . .
ကျွန်တော့် စောက်သုံးမကျမှု ကျွန်တော်ပေါ့
အခုတောင် ကျုပ်တို့ အဖွဲ့လည်းအမေရိကန်ကနေ
မယုံရင် . . .ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားလို့ လှမ်းပြောယူရတဲ့
ဟင်း . . . ဟင်း . . . ဟင်း . . .
မကောင်းတတ်လို့. . .ဟုတ်ပြီလား
အိုး . . .ကျုပ် ဗော့ဒ်ကာ
ခင်ဗျားတို့တွေက အဲဒီဖဲလို ပိန်းနေမယ်ဆို
အရင်လို တိုင်း ပြု ပြီး
အိုး . . .အိုး . . .
ဥပမာ – အဲဒါက အမျိုးသားအင်္ဂါ
အာဟာရဓာတ် အမျိုးပေါင်း (၅၀) ကျော်နို့ဦးရေ
ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ခင်ဗျားကို စောက်ရမ်းချစ်တာ
ဟော. . .ပြောနေပြီ ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက်
Posted by TH03HT4N3 [aNTIMa] at 10:13 AM No comments:
ဆေးပေါ့လိပ်မီးခိုးတွေရှိသလို သူတို့ကိုငေးကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေလည်းရှိ၏။
Posted by TH03HT4N3 [aNTIMa] at 1:45 PM No comments:
မတော်တဆ.. ထပ်မံရရှိသော အချက်အလက်များကို
ကိုးကား ၍… အခြေခံ အကြောင်းတရားများပါသော
ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်..။ မတန်တဆ ၀ါကျတွေနှင့်
လက်ဆင့်ကမ်း အမွေပေးခွင့်ရမရ… အသိဥာဏ်မဲ့မှုဆိုင်ရာ
မိုက်မဲတွေဝေမှုများအား… အမွေမလုကြမီ.. ငြိမ်းချမ်းစွာ
ခွဲဝေထိန်းသိမ်းလိုက်ရပါသည်.. ထိုသို့သော အကြောင်းကြောင့်
ဆောင်းဦးမပေါက်ခင်… တွေ့မြင်လိုက်ရသော ကြယ်စုများမှာ
လူနဲ့နီးစပ်သော အကြောင်းတရားတို့ အကယ်ရှိလင့်ကား
ကျွန်ုပ်တို့သည်.. မတော်တဆ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်
Posted by Moe Hlaing Nya at 5:52 PM No comments:
စာပို့သမားက အိမ်ရှေ့ကနေ ကျွန်တော့်နာမည် အမှားကြီးအော်နေပါတယ်
ဘေးကလူ Ring Tone ကကျယ်ကျယ်လောင်လောင်မြည်နေတယ်
မိန်းမကြီးက Slide ဖုန်းလေးကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်...ဟလို
ဟလို ..ကြားလား.. ဟလို...ကြားရဲ့လား...ဟလို.....ကြားရရဲ့လား
အရေးကြီးပြီဆို လူကြီးမင်းနဲ့ချည်း တိုးနေတယ်...
(မက်ဆေ့ခ်ျရောက်သွားတဲ့ အချက်လည်းပြတယ် ဘေဲလ်လည်း ဖြတ်သွားတယ်
ဘန်ကောက်က ရည်းစားဆီတော့ မက်ဆေခ်ျ့တွေမရောက်ဖူးတဲ့)
Posted by Moe Hlaing Nya at 10:22 PM No comments:
ဘလိတ်ဓား ဟာ အမွှေးရိတ်ဖို့ သက်သက်ပဲ အသုံးဝင်တာ မဟုတ်ဘူး
လက်ကောက်ဝတ် ပေါ် ထောက်ထားတဲ့ ဘလိတ်ဓား ၊၊ မေလ (၄) ရက်နေ့ ဟာ ညနေတစ်ခုပဲ ၊၊ ညနေတစ်ခု ဟာ တယ်လီဖုန်း နံပါတ်တစ်ခု ၊၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု ဟာ ဇူလိုင် (၂၄) ရက်နေ့တစ်ခုလား၊၊ ဇူလိုင် (၂၄)ရက်နေ့ ဟာ မေလ (၄)ရက်နေ့ ကိုင်ထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းလေးကို ညနေတစ်ခု မှာ နောက်ဆုံး မြင်တွေ့လိုက်ရတယ် ၊၊ နောက်ဆုံး ဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ နင့်ရယ်သံ ဖွဖွလေးတွေက နင့်လည်ပင်းပေါ်က သွေးကြောစိမ်းစိမ်းတွေဆီကနေ နားထောင်ရင် ပိုကြားရတယ် ဟာ! နင် ရယ် နေ လား ၊၊ ဟင် ဟယ်လို! ၊၊ ဗျာ . . အဲ့ဒါ ကျွန်တော် မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး ၊၊ ပြောတဲ့ကောင်ဖုန်းချသွားပြီ ၊၊ ဒီမှာတော့ ငါရော ငါ့အသံရော တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ ကြောက်တောင်ကြောက်ရတယ် ၊၊ တစ်ယောက်ယောက် ချောင်းဆိုးလိုက်သလား ၊၊ ကြောက်ရတယ် ၊၊ တစ်ယောက်ယောက် လေလည်လိုက်သလား ကြောက်ရတယ် ၊၊ ဒါမှ မဟုတ် ချောင်းဆိုး တဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ လေလည်တဲ့တစ်ယောက် လိင်ဆက်ဆံနေသလား ၊၊ ဒါကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေပဲ သိမှာပဲ ၊၊ ဒါကို စနိုက်ပါ သမားတွေပဲ သိမှာပဲ ၊၊ ဒါကို အမှိုက်ပစ်တဲ့သူတွေပဲ သိမှာပဲ ၊၊ ဒါကို အသေခံဗုံးခွဲသမားတွေပဲ သိမှာပဲ ၊၊ ဒါကို ဟိုမို တွေပဲ သိမှာပဲ ၊၊ ဒါကို နင်နဲ့နင့်အကောင်ပဲ သိမှာပဲ ၊၊ နင့်ရယ်သံတွေ ကြားရင် နင့်လည်ပင်းကို လှီးဖြတ်ချင် လာတဲ့စိတ် နဲ့ … ဘလိတ်ဓားဟာ အပြစ်တစ်ခုခု ကျူးလွန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ရ လိုက်သလို ၊၊ … … …၊၊ ငါ ကြောက်လိုက်တာ ၊၊ သွား ! အဲ့ဒီ ဘလိတ်ဓားကို လွှင့်ပစ်လိုက်စမ်း ၊၊ ပြီးတော့ . . ဟေ့လူ ကျုပ်ကိုတစ်ခု ကူညီ၊၊ ကျုပ်ဆီမှာ လာညစ်ညမ်းနေတဲ့ စိတ်တွေကို (အားလုံးရွေးချယ်) ပြီး (ဖျက်) ပစ်ပေးစမ်းပါ ၊၊ တော်စမ်း ညစ်ညမ်းတဲ့ စိတ်ဟာ မင်းတစ်ယောက်ထဲကိုမှ ရွေးချယ်ညစ်ညမ်းတယ်ဆိုတော့ .. ၊၊ ဟာ! ဟေ့ ! ၊၊ လူလို့ ထင်လိုက်တဲ့ အင်္ကျီအနက်ရောင်လေး ကြိုးတန်းပေါ်က ပြုတ်ကျသွား ၊၊ ကြိုးတန်းပေါ်က ဇူလိုင် (၂၄) ဆီ ပြုတ်ကျသွား ၊၊ ဇူလိုင်(၂၄)ပေါ်က မေလ(၄)ဆီ ပြုတ်ကျသွား ၊၊ ငါတို့ တစ်ယောက်ပေါ် တစ်ယောက် ပြုတ်ကျ ခဲ့တယ်နော် ၊၊ ဟင်! ဟယ်လို! ၊၊ ဟာဗျာ ဒါလဲ ကျွန်တော် မဟုတ်ဘူး ၊၊ ပြောတဲ့ကောင် ဖုန်းချသွားပြီ ၊၊ ဒီကိစ္စကို ဂရေဟမ်ဘဲလ် ရော သိမှာပဲလား ၊၊ ဟင့်အင်း ဒါတော့ မကျိန်းသေဘူး သူ့ဖုန်းကို ဆက်လိုက်တိုင်း မက်ဆေ့ခ်ျ မှာထားခဲ့ပါ ပဲ ကြားရတယ် မှာထားခဲ့လိုက်လေ သူအသက်ပြန်ရှင်လာရင် ခင်ဗျား မက်ဆေ့ခ်ျကို ဖွင့်နားထောင် မှာပေါ့ ၊၊ မ ရ တော့ ပါ ဘူး ဗျာ ၊၊ တယ်လီဖုန်းလေး ဟာ သေသွားရှာပါပြီ ၊၊ ညနေတစ်ခုမှာ နောက်ဆုံး မြင်လိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းပေါ့ ၊၊ အဲ့ဒါ နောက်ဆုံးလား ၊၊ နောက်ဆုံးဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ ဇာတိ ဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ ဇူလိုင်(၂၄) ဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး၊၊ လွင်မာဦးဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ မေ(၄) ဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ ငါရောငါ့အသံရော တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ ဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ ရယ်သံဖွဖွလေးတွေဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ တစ်ယောက်ယောက် ချောင်းဆိုးလိုက်တာဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ တစ်ယောက်ယောက် လေလည်လိုက်တာဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ ဒါမှမဟုတ် လိင်ဆက်ဆံနေကြတာဟာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊၊ ဟယ်လို! ဟင်! ဟယ်လို! ၊၊ လာပြန်ပြီလား အဲ့ဒါ ကျွန်တော် မဟုတ်ဘူး ပြော တဲ့ . . . . ကော. . . . င် ၊၊ အဲ့ဒါ သိပ္ပံပညာရှင်တွေပဲ ၊၊ အဲ့ဒါ စနိုက်ပါ သမားတွေပဲ ၊၊ အဲ့ဒါ အမှိုက်ပစ်တဲ့ သူတွေပဲ ၊၊ အဲ့ဒါ အသေခံဗုံးခွဲသမားတွေပဲ ၊၊ အဲ့ဒါ နင်နဲ့ နင့်အကောင်ပဲ ၊၊ သွား! လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ ဘလိတ်ဓားကို ပြန်ကောက်စမ်း ! ၊၊ ခုနက လက်ကောက်ဝတ်ပေါ် ထောက် ထား တဲ့ ဘလိတ်ဓား ၊၊ ၊၊
Posted by ဇာဇာ at 10:55 PM No comments:
ကိုဇာတိ ကျွန်တော့် ကောင်မလေးကို ရည်းစားစာ ပေးချင်လို့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လောက် ရေးပေးပါလား တောင်းဆိုမှု့ကတည်းက ဒီဘဲမှာ မျက်ရည်မရှိတော့တာပါပဲ ၊၊ လူငယ်တွေဆိုတော့ ကိုးကွယ်ချင်ရင် ကိုးကွယ်တယ် ၊၊ မကိုးကွယ်ချင်တော့ လက်ခလယ်လေးတွေ ထုတ်ပြလိုက်တာပဲ ၊၊ ဥပမာ ဗျာ လူငယ်တွေဟာ ခေတ်ကို ကိုယ်စားပြုရမယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုးက အစ ဒီဘဲလေးတွေ လက်ခလယ် ထုတ်ပြတော့ တာပဲ ၊၊ ခေတ်ကပဲ လူငယ်တွေကို ကိုယ်စားပြုပါစေ ၊၊ ရီမုကွန်ထရိုး တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာ ပေါက်ထွက်နိုင်တဲ့ ခေတ် ၊၊ ဝဋ်လည်တဲ့ ခေတ် ၊၊ သံသရာလည်တဲ့ ခေတ် ၊၊ မပြောကောင်းမဆိုကောင်း လေလည်တဲ့ခေတ် အားလုံးပေါ့ဗျာ ၊၊ ဟား) ဟား) ဟား) ဟား) ၊၊ ခွေးပစ်တဲ့ တုတ် နွားရိုက်တဲ့ ကြိမ် မွေးမေလေ့ ဘူးထွားဟားဟားဟား ၊၊ [ မှတ်ချက် ၊၊ ၊၊ ရယ်သံနှစ်ခုအား ကြား အပြီး ပထမ ရယ်သံ သည် ဒုတိယ ရယ်သံ အား ကိုးကားမထားပါဟု ဘလိုင်းကြီး ဝန်ခံအပ်ပါသည် ၊၊ စာရေးသူ ၊၊ ] ကလေးငယ်များ သည် ရုပ်ပြကြည့် ဘဝ မှာ ပင် ထွက်ကျသည် ၊၊ လူငယ်များကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း များ ကြည့်၍ ထွက်ကျသည်၊၊ အောင်မြင်လိုမှု ၊ စွန့်စားလိုမှု ၊ အမြင်ကျယ်မှု ၊ တီထွင်လိုမှု ၊၊ အသက်တစ်ရာမနေရ ၊ အမှုတစ်ရာပွေကြ ၊၊ ရှုပ်ကြ တယ် ဆိုတာကတော့ လူငယ်(မှ မဟုတ်) လူကြီး မရွေးပါပဲ ၊၊ ဦးတို့ လက်ညိုးတွေက သားတို့ ဆီမှာ ချည်းပဲ ၊၊ ဒါနဲ့ ခုနက လူငယ်တွေဆီက ထွက်ကျလာတာတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ ၊၊ ဘယ်လို ? ၊၊ ထွက်ကျလာတာ မဟုတ်ဘူး ဖောက်ထွက်လာတာလား ! ၊၊ အင်္ကျီအပွ အင်္ကျီအကျပ် ဖောက်ထွက်သည် ၊၊ ဘောင်းဘီအပွ ဘောင်းဘီ အကျပ် ဖောက်ထွက်သည် ၊၊ အလုံ့အလုံ မှ မလုံ့တလုံ ဖောက်ထွက်သည် ၊၊ ဂါဝန်အရှည်မှ ဂါဝန်အတို ဖောက်ထွက်သည် ၊၊ ဖောက်ထွက်သည် ၊၊ လူငယ်တွေဆိုတော့ကာ ဖောက်ထွက်ချင်တာပေါ့ ၊၊ ဟိုရုပ်ပြ တွေ နေရာ ကို ဒီရုပ်ပြတွေက နေရာယူလိုက်တော့ရော မအေးဘူးလား ၊၊ မအေးတော့လဲ ပူကြပေါ့ဗျ ၊၊ ဖောက်ထွက် တာပဲ ဗျာ ၊၊ ဟား) ဟား) ဟား) ဟား) ၊၊ ဦးတို့ မျက်လုံးတွေက သမီးတို့ဆီမှာ ချည်းပဲ ၊၊ လူငယ်တွေဆိုတော့ ကိုးကွယ်ချင်ရင် ကိုးကွယ်တယ် ၊၊ မကိုးကွယ်ချင်တော့ လက်ခလယ်လေးတွေ ထုတ်ပြလိုက်တာပဲ ၊၊ ခလုတ် တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာ ပေါက်ထွက်နိုင်တဲ့ ခေတ် ၊၊ လူငယ်ဆိုတော့ မျက်ရည်မရှိတော့ မှ ပဲ ငို ချင် လာ တယ် ၊၊ ဒါ နဲ့ ဒါနဲ့ ကိုဇာတိ ကို ဇာ တိ ကိုဇာတိ က လူငယ်လား ဟင် ၊၊ ၊၊
Posted by ဇာဇာ at 6:05 PM No comments:
သူ့ဘာသာပြီးသွားတော့မှ ထထွက်လာခဲ့တယ် ၊၊ ၊၊
နောက်ဆုံးတော့လေ ၊၊ အားကိုးဆုပ်ကိုင်စရာမဲ့နေတဲ့ ငွေကြေးချမ်းသာသော အဘွားအိုကြီးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ မှေးစက် ဖို့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ အလိုမတူပေမယ့် ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ် ဟာ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းထဲကိုတွန်းအချခံလိုက်ရတယ်၊၊ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ အချစ်ဦး ရယ်၊၊ အချစ်ဦး သီချင်းဟာ ကြေကွဲစွာ ကွဲကြေပြီးအငွေ့ပျံသွားပြီ ၊၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ခြင်းတွေဟာ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါပြီ ၊၊ မုန်းတီးခြင်းနဲ့သာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါတော့ … ၊၊ အချစ် ရယ် … ၊၊ ၊၊
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ညည့်ငှက်တစ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့တာလေ ၊၊ ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတဲ့ ကဗျာဆရာ ဖြစ်ခွင့် ဟာ အရမ်းကို ဘဝဆန်ခဲ့ပါတယ်၊၊ ငယ်စဉ်ဘဝထဲက မတ်စောက်ခဲ့တဲ့ လှေကားတွေ ခုချိန်ထိလဲ မတ်စောက်နေဆဲပါ၊၊ ကျွန်တော့်လက်ရှိဘဝဟာ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ကျွန်တော်မလိုချင်ဆုံးဘဝပါပဲ ၊၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လိင်မှုရေးရာ ကို အဲ့ဒီ မိန်းမတွေဟာ ခူးဆွတ်ကြတယ် ၊၊ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်တော် ရပ်တည်မှု အခက်အခဲကို အဲ့ဒီမိန်းမတွေဟာ ငွေကြေးနဲ့ လဲလှယ်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီမှာလိင်မှုခရီးထွက်ကြတယ် ၊၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရည်ပျော်ပစ်ပြီး မြေကြီးထဲ တိုးဝင်ပျောက်ကွယ် ပစ်လိုက်ချင်တယ် မေမေရယ် ၊၊ ကျွန်တော် ညဉ့်ငှက်တစ်ကောင်မဖြစ်ချင်တော့ဘူး၊၊ ညဉ့်ငှက်တစ်ကောင် ကျွန်တော် မဖြစ်ချင်တော့ဘူး ၊၊ ကျွန်တော်စာရွက်တွေပေါ်မှာ ကဗျာတွေရေးပြီး ကောင်းကင်ပေါ် ဝေ့ဝဲပစ်တင်ပစ်လေ့ရှိတယ် ၊၊ တမလွန်က မေမေ ဖတ်ဖို့ပါ၊၊ ဗီးနပ်စ် ကို ဂြိုလ်တစ်ခုလို့ မသုံးပဲ နတ်သမီးလို့ပဲ သုံးရအောင် ၊၊
ဒီစာရွက်ထဲက ကဗျာတွေ က မင်းရေးတာတွေလား ၊၊
ဘာလို့ လွှင့်ပစ်တာလဲ ၊၊
မမဟာ ကျွန်တော့်ဆီကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ရောက်လာခဲ့တယ် ၊၊ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဆိုတာ ဘာမှ ပေကျံနေခြင်းမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ ၊၊ အလိုဆန္ဒ၊လောဘ၊ရာဂ ၊၊
တို့ အရမ်းသဘောကျတယ် ၊၊ လွှင့်ပစ်တာကိုတော့နားမလည်ဘူး ၊၊
တမလွန်က မေမေ့အတွက်ပါ မမရယ်။
တကယ့်ကိုသန့်သန့်ရှင်းရှင်းတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ မမဟာ ကံကောင်းတဲ့ ပန်းပင်လေးပဲ။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ရှုစောင့် ရှောက်မလဲ။ ငေးရုံလေးသာ ငေးဖို့တောင်တတ်နိုင်ပါ့မလား။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာ မမသိသွားရင် ကျွန်တော့်ကိုရွံသွားမှာပါ။ မမနဲ့ တွေ့ဆုံရခြင်းဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရောထွေးပါဝင်လာတဲ့ ကြောက်ရွံ့မှု တစ်ခုပဲ။
ကဗျာဆရာနဲ့ညဉ့်ငှက်တစ်ကောင်။ ဘယ်အလင်္ကာနဲ့တွဲရေးရမလဲ မမရယ်။ ကျွန်တော်အချစ်ဆုံးက ကဗျာ။ ကျွန်တော် အလေးစားဆုံးက ကဗျာဆရာတွေ။ ဟုတ်တယ် မမ။ ကျွန်တော်အချစ်ဆုံးက ကဗျာ။ မမ။ မမ။ မမက အကောင်းမြင်ဝါဒီ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေအားပြည့်လာတယ်။ မမပြုံးလိုက်ရင် လျှပ်စီးလက်လိုက်သလိုပဲ။ ရင်ခုန်ကြောက်ရွံ့မိ။ အခိုက်အတန့် ပျော်ရွှင်မှုကို တစ်ဘဝလုံးနဲ့လဲရဲသလား။ ကျွန်တော်လဲချင်တယ်။ မမကို ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေးလိုက်တယ်။ မမနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးချိန် တိုင်းဖြစ်ရတဲ့ ညဉ့်ငှက်ဘဝ။ အဲဒီပျံသန်းမှုမှာ ကျွန်တော်မောနေပြီ။ လေဒီကြီးတစ်ယောက် ကားတိုက်မလိုဖြစ်တယ်။ ဝင်ကူလိုက်တာ လက်ဖဝါးကွဲသွားတယ်။ လေဒီကြီးက ဆေးဖိုးဆိုပြီး ပိုက်ဆံတစ်အုပ်ပေးတာယူပြီး အိမ်ပြန်အိပ်တယ်။ ညဉ့်ငှက်ဘဝရဲ့ အားလပ်ရက်။ လကို ကဗျာဆရာတွေ ဘာလို့ခဏခဏစာဖွဲ့လဲသိလိုက်တယ်။ အဲဒီအရာဟာ အလွမ်းလား မမ။ မမက ကစားကွင်းကိုခေါ်သွားတယ်။
မင်းမနေ့က ပေးတဲ့ကဗျာ အလွတ်ရရင်မင်းပါးစပ်နဲ့ခုရွတ်ပြ။
ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုရှေ့မှာထားပြီး ကဗျာရွတ်ပြခွင့်ရတာ ဘယ်လို မင်္ဂလာလို့ခေါ်မလဲ။
ဒါပေမယ့် အဲဒါကတို့အချစ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း တို့မနာလိုဘူး။
တို့အချစ်နဲ့ဘာကိုမှမရောထွေးဘူး။ ဘဝဆိုတာကတော့ လာရောထွေးလိမ့်မယ်။
မင်း တို့အနားရောက်ဖို့တာဝန်ယူရင် တို့က မင်းဘေးနားမှာရှိနေဖို့တာဝန်ယူတယ်။
ကလေးကစားကွင်းက ကလေးဘဝ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ပြန်မြင်ယောင်စေတယ် မေမေရေ …။ မေမေရေ …။ ဘဝက တစ်ခါတလေကိုယ်ချစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံနေရရင်ပဲ အဓိပ္ပါယ်ရှိတတ်တာပဲ။ များသောအားဖြင့်အတိုင်း ပေါ့။ လေပြည်ထဲက အောက်စီဂျင်တွေမီးလောင်ခဲ့ပြီ။ နောက်ဆုံးလို့မပြောပေမယ့် မမကသဘောပေါက်ပုံရတယ်။ မျက်လုံး ချင်းဆုံနေကြတယ်။ အချိန်တွေကုန်ဆုံးမသွားပါစေနဲ့ရယ်လို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အသိမပေးဘဲ ဘုရားဆုတောင်း တယ်။ ညနေခင်းဟာ လေပြည်တွေကိုယူခဲ့ပြီ။ လေပြည်တွေဟာ ပူအိုက်ခြောက်ကပ်မှုကို ယူခဲ့ပြီ။ မမက ကျွန်တော့် လက်ခုံမှာ စာကြောင်းလေးတစ်ခု ရေးပေးခဲ့တယ်။ Eyes Bye! မျက်လုံးတွေရဲ့ နှုတ်ဆက်မှုပေါ့။
မင်းအဲဒီဘဝက ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားပါ ကောင်လေးရယ်။
အိမ်မရှိဘူးကွယ်။ ။ (မောင်သိန်းဇော်)
ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းတွေ ခွမ်းကနဲ ကွဲသွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အမြစ်တွေ တိုတောင်းခဲ့ …။
အဲဒီနောက်ပိုင်း သိပ်မကြာခင်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိထွေးဆိုတာရောက်လာတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ထက်ရှစ်နှစ်လောက် ပဲကြီးတဲ့ မိထွေးဟာ ကျွန်တော့်ကိုမြင်ကတည်းက စီးပိုးစွာဆက်ဆံတယ်။ အခွင့်အရေးတွေယူဖို့ သူ့မှာလက်တံတွေ အများကြီးပါလာတယ်။ အဖေ့ကိုလည်း အရမ်းနိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လူငယ်ဘဝဆီကို ငရဲဟာမြေကြီးထဲက ထိုးထွက်လာတယ်။ ဘယ်ဘဝဟောင်းက လွှတ်လိုက်တဲ့ငရဲလဲ။ မေမေရေ …။ အသက်ရှင်ခြင်းမှာ တံခါးပေါက်တွေ ပိတ်ဆို့ခဲ့ပေါ့။ တစ်နေ့ အဖေခရီးထွက်သွားရတယ်။ အားကိုးစရာမရှိတဲ့အခါမှာ မိုးသက်လေပြင်းဟာ အရင်ရောက်လာ တော့တာပဲ။ ၁၈နှစ်သားလေးဟာ မိုးခြိမ်းသံတွေကိုကြောက်တယ်လို့ပြောရင် အဆန်းတကြယ်ဖြစ်သွားမလား။ မိသားစု ကောင်းကင်ဟာ ဘယ်ဆီမှာ။ ကျွန်တော်ကြောက်လိုက်တာ။ ကျွန်တော့်မိထွေးဟာ ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ …။ ကျွန်တော့်လူပျိုရည်ကို ပေါက်တူးတစ်လက်နဲ့ တူးဆွခဲ့။ ကျွန်တော့်လိင်မှုအစုအဝေးကို ကျွန်တော့်မိထွေး အပိုင်စီးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အလိုမတူမှုဟာ အသံထွက်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်လိင်မှုအဖွဲ့အစည်းမှာ သူပျော်ပွဲစားထွက်ခဲ့ တယ်။ ကျွန်တော့်အလိုမတူမှုဟာ စီးကျခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော့်လူပျိုရည်ဟာ စီးကျခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော့်မျက်ရည်တွေ စီးကျခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းလိုက်တာ။ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို အဝေးကြီးချလိုက်တယ်။ အိမ်ဆိုတဲ့ကြိုးကိုဖြတ်ခဲ့တယ်။
မေမေ့အနီးမှာ ပန်းတွေနဲ့ဝေ … လို့။ ။
အဖေက မေမေ့လက်ကိုတွဲ …။ မေမေက အဖေ့လက်ကိုတွဲ။
ကျွန်တော်က မေမေ့လက်ကိုတွဲ။ ကျွန်တော်က ဖေဖေ့လက်ကိုတွဲ။
တစ်ယောက်ထဲ ဝင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင် …။ ။
Posted by mgphonemyint at 11:39 PM No comments:
ဆောင်းဟာ တစောင်းကြီးဝင်လာပြီ။ ညှို့အားပြင်းလွန်းလို့ ညှို့ကလွတ်ထွက်လာတဲ့မြားပါ။
ခေတ်ကြီးကို ကဗျာဆရာဟာ အဲဒီလိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။
အတော်လေးစိတ်နာနေပုံပါပဲ။ နာကြည်းနေပုံပါပဲ။ (သူကဝဲစားနေလို့လားမသိ)
ခမျာ … ခင်ဗျာ … သေဗျာ … လုပ်ဆောင်မှု (လုံးဝန်းသော)
ဖန်ခွက်ကိုခွဲကြည့်လိုက်တော့ ဖန်ကွဲစတွေ …
ရေခဲမြစ်ဝှမ်းတလျှောက် အကြည့်အေးအေးတွေ ကမ်းနားသစ်ပင်တွေကအစ
ခေါ်ထုတ်ခဲ့ပါ ဦးရဲ့ သမီး လေ(ခြောက်လ) လည်ပြီ/ပတ်ပြီ
ခမျာ … ခင်ဗျာလို့ဆက်ရေးရမလား
အဲဒီလိုတွေ့တာနဲ့ ဘယ်လိုခံစားထားတယ်လို့ပြော ဆောင်းပါးဖြစ်ပြီ
ကဗျာဆရာဟာ ခေတ်ကြီးကို အဲဒီလိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။
ဆောင်းပါးဖြစ်ပြီ။ ပါးပါးလေး စောင်းထား
အဲဒီလို သိမှုဟာ ဆောင့်ခုန်ထွက်နေတော့
ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် သေသွားတယ်
ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဘာလုပ်မှာလဲ
အခု ခင်ဗျားသိမှုထဲက ကျောက်တုံးလေးဟာ ရေပေါ်ပေါ်လာပြီ
လိုက်ပါ ဦးရဲ့သမီး လေ(ခြောက်လ) လည်ပြီ/ပတ်ပြီ
သောက်ကျိုးနဲ ကွဲထွက်ကုန်ပြီ (ကုန်ပြီ=ရှိသမျှထဲက ဘာမျှမကျန်တော့)
ဘာမျှမရှိတော့ ခင်ဗျားလည်းမရှိတော့ ကဗျာဆရာလည်းမရှိတော့
လုပ်ပါဦး ရေးပါဦး နောင်နှစ်ခါ တန်ဆောင်မုန်း
စက်တင်ဘာလ ၂၀ရက်၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်။
Posted by mgphonemyint at 9:17 PM No comments:
သူဆေးလိပ်သောက်နေသည်။ အလိုမကျမှုများစွာနှင့် ညတစ်ညကို ခဲရာခဲဆစ်ဖြတ်သန်းနေရပုံပေါ်သည်။ ဆေးပေါ့လိပ်ကို မီးခဏခဏညှိနေရတာကို သိပ်ဘဝင်မကျချင်။ ဘဝင်မကျစရာတွေကအများကြီးပဲ။ အိပ်မရမှန်းသိသိကြီးနှင့် ခင်းထားသည့်အိပ်ယာကိုကြည့်ပြီး စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေသည်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်တော့်အတွက် စကားပြောဖော် တစ်ယောက်လောက်လိုချင်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ခြင်တွေဟာ အတော်မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့သတ္တဝါတွေ။ ဆေးလိပ်မီးခိုးတွေ မှုတ်ထုတ်လိုက်တော့ ပန်းတစ်ပွင့်ဖြစ်လာသည်။ ခြင်များ ဥဥရန်ရေအိုင်တစ်အိုင်ဖြစ်သင့်သည်ဟုထင်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ်မှုတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမှဖြစ်မလာ။ အရာရာတိုင်းဟာ သူ့အတွက်ရယ်စရာဖြစ်နေတော့သည်။ မင်းတို့ဟာ ကယ်ရီယာတွေပဲဟုကျွန်တော်အော်ပြောလိုက်သည်။ သူ့ကိုခြင်တွေကဝိုင်းဟားကြသည်။ သူတို့လေထဲတွင်ပင် လိင်ကိစ္စဖြေရှင်းကြသည်ဟုပြောသည်။ သူကခြင်တွေအတွက် လေထုကြီးမရှိတော့မှာ ကြံဖန်ပူပန် နေလိုက်သေးသည်။ အမြဲတမ်းဆာလောင်မှုဖြင့်ပျံသန်းနေသည့် သူတို့ကို သူသဘောကျမိသည်။ ကျွန်တော် ခြင်တော်တော်များများကိုသတ်ဖူးသည်။ ခြင်တွေဟာသူ့ကိုခြင်သတ်သမားအဖြစ် စွပ်စွဲဖို့ကြိုးစားချင်ပုံမရ။ ဆာလောင်မှုက သူတို့အတွက်ပိုအရေးကြီးသည်။ မသေသေးသရွေ့အစာရှာရမည်။ မသေသေးသရွေ့ဆာလောင်နေသည်။ ဆေးလိပ်ကိုဖွာလိုက်သည်။ မီးသေနေပြီ။ မီးပြန်ညှိလိုက်သည်။ အစပြန်ရောက်သွားသည်။
သူဆေးလိပ်ထိုင်သောက်နေသည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တွင်တော့ သူအတန်ငယ်အိုစာလာသည်။ သူ့အလိုမကျမှုကို အသာထားပြီး သူ့အပေါ်အလိုမကျမှုများကိုတွေးကြည့်သည်။ ဖင်စီခံပူလာမှ လက်ထဲကစီးကရက်ကိုသတိရသည်။ မိန်းမဖြစ်သူကတော့ အိပ်ယာထဲမှာအိပ်မောကျနေပြီ။ အခုတလော ဒီလိုထိုင်နေရတာကို ကျွန်တော်သဘောကျနေသည်။ ပူအိုက်သည့်ညဆိုတော့ ခြင်တွေအုံခဲနေသည်။ ဆေးလိပ်မီးခိုးတွေကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တော့ ခြင်များရှဲသွားသည်။ သူတို့ မီးခိုးငွေ့ကိုကြောက်ကြဟန်တူသည်။ နောက်တစ်ကြိမ် မမှုတ်ထုတ်ဖြစ်တော့။ အတွေးကဆက်လက်စီးဝင်လာသည်။ အရာရာဟာငါ့အတွက်ဆက်ခဲကြမ်းတမ်းနေသည်လား။ မင်းတို့ဟာ သတ္တိကောင်းတဲ့သူတွေပဲလို့ ခြင်တွေကိုအော်ပြောလိုက်သည်။ သူ့အနားတွင်ခြင်တွေပိုများလာသည်။ ပျံသန်းမှုကသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားဟုပြောသည်။ ကျွန်တော်ကခြင်တွေပျံသန်းစရာ လေထုကြီးမရှိတော့မှာကို ကပ်သီးကပ်သပ်ပူပန်နေလိုက်သေးသည်။ ဆာလောင်မှုဖြင့် အမြဲတမ်းပျံသန်းနေသည့် သူတို့ကို ကျွန်တော်သဘောကျသည်။ ခြင်အတော်များများကို သူသတ်ဖူးသည်။ ခြင်တွေဟာ သူ့ကို ခြင်သတ်သမားအဖြစ်စွပ်စွဲကြဖို့ထက် မသေသေးသရွေ့ဆာလောင်နေမှုကြောင့် အစာရှာဖို့ကပိုအရေးကြီးပုံရသည်။ ဆေးလိပ်ကိုဖွာလိုက်သည်။ မီးသေနေပြီ။ မီးပြန်ညှိလိုက်သည်။ အစီခံသာရှိတော့သည်။ သူ ကုလားထိုင်ပေါ် ချည့်နဲ့စွာ မှီချလိုက်သည်။
စက်တင်ဘာလ ၈ရက်၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်
Posted by mgphonemyint at 5:21 PM No comments:
" စိတ္တဇညများ ကုန်ဆုံးလွန်မြောက်ပါစေကွယ် "
ဘယ်ကိုကွေ့မယ်ဟေ့ ... ပြီးရင်
ညာကိုကွေ့မယ် ... လူမိုက်တွေဟာ
ဘယ်ကွေ့ ... ညာကွေ့ ... ဘယ်ပြန်ကွေ့
သည်းသည်းမည်းမည်းမိုးထဲ ငါတို့သည်းသည်းမည်းမည်းဦးတည်ထားရာ မော်လမြိုင်
အသွေးအသားတွေကို ခက်ရင်းနဲ့ထိုးကော်ခံလိုက်ရတဲ့ မနက်စာ
ခဏနေတော့ ... ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်နေတဲ့ မော်လမြိုင်ကို
မော်လမြိုင်ကတော့ အတ္ထရံပုခက်ထဲ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးလွှဲလို့ ကျန်ရစ်ခဲ့
အဲဒီနေ့က ၂၉ ရက်၊ ၈ လ၊ ၂၀၁၀။
Posted by mgphonemyint at 11:02 PM No comments:
မင်းဆီမှာ အင်းလျားကန်ရှိလား။ အေး … မရှိဘူး။ ငါ့မှာ အင်းလျားကန်ဆိုတဲ့ အသိမရှိဘူး။ ဆိုလိုတာကကွာ အင်းလျားကန်ဟာ ငါ့အသိထဲကမဟုတ်ဘူး။ အင်းလျားကန်ဟာ ငါ့သိမှုထဲမှာ လိင်မကွဲပြားဘူး။ ငါဟာ အင်းလျားကန်စောင်းပေါ်က နှစ်ယောက်ထိုင်ခုံမှာ တစ်ယောက်တည်းထိုင်တယ်။ နှစ်ယောက်ဆောင်းထီးကို တစ်ယောက်တည်းဆောင်းတယ်။ အိမ်က နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း အာသာဖြေတယ်။ စကားမစပ် ကျွန်တော့်ကုတင်ဘေးမှာ အင်းလျားကန်က ဘူးသီးကြော်ဆိုင်ရှိတယ်။ တံခါးဖွင့်ထားတဲ့ဆီက အလင်းရောင် ကျနေတယ်။ အင်းလျားဟာ ဘယ်သူနဲ့သွားအိပ်နေလဲ မသိရဘူး။ ဖြစ်ချင်တော့ အင်းလျားရဲ့ ညီမဝမ်းကွဲနဲ့ ကျွန်တော် တူတူမအိပ်ဖြစ်ဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒါ တော်တော်ကြာပြီ။ အပြင်မှာမိုးတွေရွာနေပြီ။ ငါ့ဆီမှာအင်းလျားကန်သာရှိခဲ့ရင် သူ့ကျောမှာ အပေါက်တွေ ဗရပွဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာဆန်းသလဲ။ အင်းလျားဟာမွေးကတည်းက ကျောမှာ အပေါက်တွေနဲ့။ သူ့အကြောင်းလူတွေဘာပဲရေးရေး အင်းလျားရဲ့ အတွင်းသားကို ငါမသိဘူး။ ဘာကအရေးကြီးလို့လဲ။ အင်းလျားဟာ အင်းလျားဆိုတာကိုတောင် မကြာခင်လေးကမှသိရတာပဲ။ သိပ်တော့လည်းမဆန်းပါဘူး။ အင်းလျားဟာ သူလိုကိုယ်လို အချဉ်ရည်ပါပဲ။ ဘယ်သူကဘာသိစရာလိုသလဲ။ ဘယ်သူမှလည်းမသိပါဘူး။ မေးခွန်းတွေကိုရပ်လိုက်တော့ လေ။ ညမိုးချုပ်နေပြီ။ ငါ့တံခါးရွက်တွေ ပိုပိုလေးလာပြီ။ စိတ်ကိုပိတ်လိုက်တော့ ကျနေတဲ့အလင်းရောင်ကပါ ပိတ်သွားတယ်။ ခုချိန်များ ဖိနပ်ပြတ်လိုက်လို့ကတော့ ငါတော်တော်ပျော်မိမှာ။ အင်းလျားဟာ လူသံသူသံတွေနဲ့ ဗွက်ထနေ ပြီမဟုတ်လား။ လူသံသူသံတွေက အင်းလျားဆီကနေကန်ပြီးထွက်လာတာ။ တံခါးရွက်တွေထက်က အိမ်အမိုးတွေဟာ လှလှပပကောင်းကင်ပြာပြာဖြစ်သွားပြီ။ အိုး … လှလိုက်တာ။ အိမ်အမိုးတွေ။ ကြိုးတွေ။ အင်းလျားတွေ။ တရိပ်ရိပ်။ ဒရွတ်ဆွဲနေတဲ့ တိမ်တွေအင်းလျားကိုငုံ့ကြည့်နေပုံက အာသာပြင်းလွန်းလိုက်တာ။ အင်းလျားအိပ်နေတဲ့ပုံကိုလည်း ခင်ဗျား ထည့်ပြောဦးလေ။ တိမ်တွေဟာ အထစ်ထစ်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ အင်းလျားဟာ ခိုးကူးခံလိုက်ရကတည်းက မစစ်တော့ ဘူး။ အင်းလျားပျောက်သွားပြီ။ အခု။ သူဌေးကြီးကလည်းအင်းလျားနဲ့။ အမှိုက်ကောက်တဲ့ကလေးအိတ်ထဲမှာလည်း အင်းလျားပဲ။ အနှစ်လေးဆယ်စစ်ပွဲအကြောင်းစာအုပ်ကိုကိုက်ဖြတ်နေတာလည်း အင်းလျားပဲ။ အရန်ခုံပေါ်ထိုင်နေတာ လည်း အင်းလျားပဲ။ အဲဒီလိုကြောင့်ပဲ အင်းလျားဟာ လူပေါင်းသူပေါင်းဆံ့လာတယ်ပြောခံရတယ်။ တကယ်က တံခါးကို ပိတ်လိုက်ရင် အလင်းရောင်ပါပိတ်သွားရမှာ။ အလင်းပိတ်တဲ့ခေတ်ကို ကုန်သွားပြီလို့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောဖူးသလားပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါလည်း ကျွန်တော်ရမ်းလိုက်တာ။ ဇာတ်လမ်းက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး။ အင်းလျားဟာ အဆုတ်ထဲကို ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ လေကောင်းလေသန့်တွေ ရှူသွင်းခိုင်းတယ်။ ပါးရည်နပ်ရည်ရှိတဲ့ အင်းလျားဟာ ရူးချင်ယောင်ဆောင် နေတယ်။ အခု လူပြောသူပြောများနေတာလည်း ဒါပါပဲ။ အင်းလျားဟာ သမိုင်းပဲ။ အိုး … လှလိုက်တာ။ အင်းလျားတွေ။ ဘယ်တံခါးကိုပိတ်ပိတ် အင်းလျားက ပိတ်မသွားဘူး။ အို … ဂိုဒေါ့ရေ … မြန်မြန်လာပါတော့။ ဇာတ်လမ်းကပိတ်တော့မယ်။
Posted by mgphonemyint at 10:38 PM No comments:
ခေတ်ပေါ်ကဗျာ ဂုရုကြီးသုံးဦးသည် ခရေပင်ရိပ်ဝယ်ထိုင်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆွေးနွေးလေသည်။
ပထမဆရာကြီး။ ။ “ကျွန်တော်တို့ မြန်မာကဗျာလောကဟာ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားရင်တော့ မကြာဘူး၊
ဒုတိယဆရာကြီး။ ။ “ဟုတ်တယ်”
ပထမဆရာကြီး။ ။ “အခု နောက်ပေါက်ကောင်လေးတွေ သာဆိုးသေး။ ဘာတဲ့ ခံစားမှု နိမိတ်ပုံရိပ်တွေ မပါစေနဲ့တဲ့၊
ကဗျာကို ကဗျာလို မရေးနဲ့တဲ့ ”
ဒုတိယဆရာကြီး။ ။ “ဘယ်လို ဖတ်ရမှာလဲ” “ခံစားချက်တွေ အင်္လကာတွေမပါဘဲ ကဗျာ ဖြစ်ပါ့မလား၊ ဒီရောဂါကြီး
ပထမဆရာကြီး။ ။ “ဟုတ်တယ်…. မြန်မာကဗျာလောကကို ကယ်တင်ရမယ်… ကဗျာဆိုတာ ကဗျာ ပီသရမယ်”
လက်သီးလက်မောင်းတန်း၍ သူတို့သုံးဦးသား ကြွေးကြော်လိုက်ကာ “ကဗျာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့”ဟူ၍ စတင်ဖွဲ့စည်းလေသည်။ ၄င်းအဖွဲ့ကြီးသည် တစ်စထက်တစ်စ အင်အားကြီးမားလာကာ ယနေ့ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နံတစ်လျားအဖွဲ့ပေါင်း “၉၀”ကျော် ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။ (ရှိတာမှ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း (၁၄)ခုတည်းရယ်၊ အဖွဲ့က (၉၀) ကျော်တဲ့…။ ကဗျာဆရာတွေများ ပုံပြောပါတယ်)
ဤအဖွဲ့ကြီး၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ကဗျာများအချိန်မီကယ်တင်ရေး ဖြစ်သည်။ တချို့ကဗျာတွေကို အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ပေး သည်။ တချို့ကဗျာတွေကို နာတာရှည် ကုပေးသည်။ တချို့ကဗျာတွေကို အထူးကြပ်မတ်ဆောင်တွင် ထား၍ ကုသပေးသည်။ ဤနိုင်ငံထဲတွင် ကုသ၍ မရပါက နိုင်ငံခြားထိပင်စေလွှတ်၍ ကုသပေးနိုင်သည်အထိ ဤအဖွဲ့ကြီး၏ ငွေကြေးအင်အားမှာလည်း တောင့်တင်းလာခဲ့သည်။ ခြေထောက်တွင် အမာရွတ်ရှိရုံမျှဖြင့် ပေါင်းရင်းမှဖြတ်ပစ်သည်အထိ စိုးရိမ်ကြီးတတ်သည်မှအပ ဤအဖွဲ့ကြီးတွင် ဆိုးဆိုးရွားရွား ထောက်ပြစရာ မရှိပေ။
ယခုအခါ ကဗျာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးသည် အင်အားကြီးမားလာကာ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကမ္ဘာတ၀န်းလုံးတွင် ရုံးခန်းခွဲများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ အခြေအနေပေးလာပါက ကမ္ဘာ့ကဗျာကယ်ဆယ်ရေးနေ့ဟု သတ်မှတ်ကာ ထိုနေ့တွင် ကဗျာများစု၍ သွေးလှူဒါန်းခြင်း၊ ကဗျာအချင်းချင်း ဖေးမကူညီခြင်းများ ပြုလုပ်ကြရန်အထိ စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
သူတို့အဖွဲ့ကြီး၏ ဖြေရှင်းမရနိုင်သေးသည့် ပြဿနာတစ်ပုဒ်မှာ သူတို့အဖွဲ့ကြီး၏ ဆောင်ပုဒ်သတ်မှတ်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ တချို့ကဆောင်ပုဒ်ကို ကာရန်နှင့် ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ ရေးလိုသည်။ တချို့က နိမိတ်ကြမ်းကြမ်းသုံး၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရေးချင်သည်။ တချို့က ကဗျာဆိုတာ နူးညံ့ရမည်ဟုဆိုကာ နူးနူးညံ့ညံ့ ရေးးချင်ကြခြင်းကြောင့် သူတို့အဖွဲ့ကြီးတွင် ယနေ့ထက်တိုင် ဆောင်ပုဒ် မရှိသေးပေ။­­­­­
Posted by mgphonemyint at 10:22 PM No comments:
ဖြစ်ပုံအရဆိုရင် ဒါ ပျက်ဖို့ပဲ
ခုက ရောင်စုံပူပေါင်းတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးမှုတ်နေတာ
ဒီလိုလည်းဖြစ်တာပဲ … ဘယ်သူ့ကိုသွားတိုင်ချင်လဲ
တိုင်တစ်လုံးငါးမတ် … (တစ်ကျပ်နဲ့တစ်မတ်) ဟေ … ဟေ့
မလုံခြုံဘူး … ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်ပဲဟေ့
ယိုင်ရင်း … ယိမ်းရင်း
ဖန်ခွက်နှုတ်ခမ်းချင်း ထိထိမိမိ မှ ထိထိမိမိ
လွန့်ရင်း … လူးရင်း
မှောင်လွန်း … မည်းလွန်း … နက်လွန်း
ပျက်ဖို့လည်း လွယ့် … လွန် … လွန်း
၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၇ရက်
Posted by mgphonemyint at 10:01 PM No comments:
မင်းအိမ်ရှေ့က ဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့ သစ်ပင်
မြေပဲယိုလမ်းမ တောင်တန်း ပင်လယ် မိုးတိမ်
ဓ ၄၅ ၂၂၆ ၅၀
မင်းအမည်နဲ့ mail ပို့လိုက်တယ်။ ။
Posted by Moe Hlaing Nya at 12:02 PM No comments:
Posted by Moe Hlaing Nya at 11:14 PM No comments:
သိမှု အအိုအဟောင်းတွေကို မြို့ပြင်ထွက် လိုင်းဆွဲခိုင်းထားလိုက်
ရထားလိုတွဲထားတဲ့ စကားလုံးအတွဲလိုက်ကြီး အာရုံထဲအဖြတ်မှာ
သိမှုတံတားတုန်ခါနှုန်းဘယ်လောက် … ရှိမှု … အဖြတ်
ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်နေရာအထိဖြတ်မှာလဲ … ဖြတ်စရာ - ဆရာ - ဇရာ
အို - ဘယ်နှစ်ဦးကို ဘယ်လောက်ကြာကြာကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းလဲ
ဟာဗျာ - ဝါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းမနေနဲ့လေ … ရမ်းချင်ရင် ဘေးနားမှာ ယပ်တောင်လေးလာရမ်း
ဒီဂိုးလ်ဒင်းလန်းမှာက ပူတယ် … မာရီယာ အိုဇာဝါ - အိုဇာ
အိုဇာ - ဝါ - ဝါ - သူ့ကိုသိလား
ငယ်ငယ်ကတည်းက ခုချိန်ထိ စွန် တစ်ခါမှမလွှတ်ဖူးသေးလို့
ရှက်ရမှာလား တေလေ …
တွေ့ပြီလား စကားလုံးတွေဟာ ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ရှိမှန်း
ခြားနေတဲ့ ရှိမှုတွေကြား သိမှုတွေကိုတန်းလိုက်ညှိမနေနဲ့ေ
တော်ပြီ - မောတယ်- woah – oh – my – fucking – god
၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၈ရက်
Posted by Moe Hlaing Nya at 8:20 PM No comments:
တတိယအကြိမ် လက်မထပ်မီ ရက်ပိုင်းအလို…
မင်းငါ့ကို တော်တော်ကမြင်းတဲ့ကောင်လို့ မှတ်ချက်မစောပါနဲ့ဦး
ငါက အသက်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ကျတာ
မရေမရာ ငါ့ငယ်ချစ်ကြီးက ငါ့ဆီကိုရောက်လာတယ်
အဲဒီအချိန်က မိုတွေသည်းနေတဲ့ ညနေစောင်းကြီး
အဲဒါနဲ့ ငါတို့နှစ်ယောက် အနွေးဓါတ်ကောင်းကောင်းရတဲ့
ငါလည်း သူ့ကို ငါတို့နှစ်ယောက်အခုကော်ဖီသောက်မှာ
နှစ်ယောက်စလုံးအကျိုးမရှိနိုင်မယ့် ဘယ်လိုစကားမျိုးနဲ့မပြောပါနဲ့လို့ ပြောထားလိုက်တယ်…
ကော်ဖီတွေအကြောင်း မိုးရာသီအကြောင်း Just for Laugh တွေပြောနေလိုက်တယ်
မနက်ဆို ကလေးတွေမနိုးသေးဘူး ငါအလုပ်ထဒိုးရတယ်…
အဲဒီအချိန်မှာ ငါ့မိန်းမဟာ ငါ့အတွက်အဖော်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး
အထွေထွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အဆုံး
သတင်းစာဖတ်ချိန်.. ကော်ဖီသောက်ချိန်ကအစ.. အတွင်းရေးမှုးအာဂျင်ဒါနဲ့သွားနေရတာ
သူမက ငယ်ရွယ်ဖျတ်လတ်ပြီး.. ငါစိတ်တိုင်းကျကိုသိတယ်
ပြီးတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အထောက်အကူအများကြီးရတယ်..
လက်တွဲလုပ်ဆောင်တဲ့ သုံးနှစ်အတွင်း ဘာအမှားအယွင်းမှမရှိဘူး..
အဲဒီ့ဝန်ထမ်းကောင်းကိုငါလက်လွှတ်လို့ဖြစ်ပါ့မလား…
ငါလည်း တစ်ပါတ်စဉ်းစားပါဦးဆိုပြီး ပြောလိုက်တယ်..
တကယ် တစ်ပါတ်လုံးလုံး စဉ်းစားခန်းဝင်နေရတာက ငါ…
မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေအတွက် မိသားစုကုမဏီကိုအပြီးအပိုင်လွှဲပေးလိုက်တယ်
ငါအလုပ်လုပ်တဲ့ကော်ပိုရိတ်မှာ ငါက ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတယ်..
ရှယ်ယာအတော်များများလည်း ငါနဲ့ ငါ့ပါတနာတွေလက်ထဲမှာ…
တကယ်တော့ ဘ၀ဆိုတာ ကြွေတစ်လက် ကြက်တစ်ခုန်ပါ
ငါငယ်ငယ်က ဆင်းရဲတာ မင်းလည်း အသိသားနဲ့
နယ်ဘက်မှာ စိုက်ပျိုးရေးခြံလေးနဲ့ စာအေးအေးဆေးဆေးရေးချင်တယ်လို့
မင်းအိမ်ထောင်ပြုတုန်းက ငါပြောခဲ့ဖူးတဲ့ဟာသကို မှတ်မိသေးလား..
ပထမအကြိမ် အိမ်ထောင်ပြုတာ မသိနားမလည်လို့
ဒုတိယအကြိမ် အိမ်ထောင်ပြုတာက ရူးသွပ်တာ
တတိယအကြိမ် အိမ်ထောင်ပြုတာက မိုက်မဲမှုလို့…
အခု ငါ့ဘ၀က အေးချမ်းနေပြီ..
မထင်မှတ်တဲ့အလှည့်အပြောင်းမှာ.. ငါစီးပွားရေးတွေ လုံးလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်
ငါ့မှာ ငွေဖြစ်လွယ်တဲ့ အမာခံပစ္စည်းတချို့ကျန်ခဲ့တယ်လေ..
လာမယ့် တနင်္ဂနွေမှာ ရွာတွဲဖက်ကျောင်းက ဆရာမလေးတစ်ယောက်နဲ့
တတိယအကြိမ် အိမ်ထောင်ပြုတာဟာ မိုက်မဲတာပဲလို့ဆိုရင်
Posted by Moe Hlaing Nya at 11:43 PM2comments:
ဘလိတ်ဓား ဟာ အမွှေးရိတ်ဖို့ သက်သက်ပဲ အသုံးဝင်တာ မဟုတ...